YEYINTNGE(CANADA): လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ဆိုတာ..
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ဆိုတာ..
Myanmar-- March 19, 2012 The cornerstone laying ceremony for Monywa Copper project was held with presence of Mr. Li Wanfu, the Chairman of MCC8 Group, Hon. Li Junhua, Chinese Ambassador in Myanmar, Mr. Yin Jiaxu, Party Chief of China North Industries Group Corporation (NORINCO), Mr. Zhi Yulin, the Vice President of NORINCO, Mr. Wang Wei, Chairman of China Wanbao Mining Co., Ltd., and the governor of the Sagaing Province, and the General of Northwest Military Area Command of Myanmar.
Abundant copper reserves in Monywa, in northern Burma's Sagaing Division, are “of great significance to strengthening the strategic reserves of copper resources in our country, and to enhancing the our influence in Myanmar [Burma],” according to NORINCO's statement. NORINCO is one of ten defense-industrial enterprises that report to China's State Council.
The Monywa mine is one of Burma's largest mining operations, and is located in Monywa Town Sagaing Province in northwest Myanmar, 120 km away from Mandalay which is the 2nd largest city of Myanmar. The project consists of constriction phase and production phase, in which the construction period is 17 months and the construction works include 6.6 km of road construction and 20 million m3 of excavation work.
The contract price of the Phase I construction MCC8 implements is US$ 50 million
Monywa, Sagaing Division, Myanmar - 07/08/2009. Settlers established along the Monywa Copper Project site, the only copper mine in Burma and one of the largest in South East Asia, retrieve mineral deposit from the waste ground discharged from the mine.
Credit: Thierry Falise/OnAsia.com
Tuesday, September 11, 2012 at 1:19pm
အဲဒီဓာတ်ပုံတွေ နှစ်အနည်းငယ်ကတည်းက .... ကမ္ဘာကို ပျံ့နှံ့နေတာကို သမ္မတရုံးက အကြံပေး ပညာရှင် ဆိုသူများ၊ လွှတ်တော် အတွင်းက ရေးရာကော်မတီများ...။ မသိကြဘူးလားလို့ မေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျား..။.................................................................................................. မုံရွာမြို့အနောက်ဘက် ချင်းတွင်းမြစ်အနီးတွင်ရှိသော လက်ပန်းတောင်းတောင်ကြီးအား မိုင်းခွဲမြေဖြိုကာ ကြေးနီသတ္တုတူးဖော်နေသည့်ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။ ဤစီမံကိန်းကြောင့် ဒေသခံများ ပြောင်းကြရွှေ့ကြရသည့် ဒုက္ခ၊ စိုက်ပျိုးမြေများ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးကြရသည့်ဒုက္ခ၊ ဇီဝမျိုးစုံများ ပျက်စီးပျောက်ကွယ်ရသည့်ဒုက္ခ၊ ရေရှည်တွင် ထိုဒေသ၌ နေထိုင်သူများ၏ ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်ထိခိုက်မည့်ဒုက္ခ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရေထု၊ မြေထု၊ လေထုများကို ပြောင်းလဲလွှမ်းမိုးစေမည့် ဒုက္ခများကို ဘာမျှမပြောသေး၊ မစဉ်းစားသေးဘဲ ဂေဟစနစ်အရ အပြန်အလှန်အမှီသဟဲ ပြုလျက်ရှိသော ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းရှိ အလွန်ပနံရလှပစွာတည်ရှိသော တောင်ကြီးတစ်တောင် ပျောက်ကွယ်သွားမှာကို စိုးရိမ်သည့် အချက်တစ်ချက်တည်းနှင့်ပင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းလို လုံးဝရပ်တန့်ပစ်ရန် လိုသည်ဟု ဘူမိပညာရှင်၊ ပထ၀ီပညာရှင်များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်ခင်သူများက ရင်ထဲမှစကားကို ဆိုကြပါသည်။ မုံရွာဒေသခံများကလည်း လဲလျောင်းအိပ်စက်နေသော ဧရာမဆင်ကြီးနှစ်ကောင်ဟု ညွှန်းဖွဲ့ထားသည့် ယင်းလက်ပန်းတောင်းတောင်ကြီးအား ဓားထစ်ရာမွှန်းနေပြီဟု ဆိုကြပါသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်ခင်သူများ၏ ရင်ထဲမှာဖြင့် ယခုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိသူများမှ အမြန်ဆုံး အကျယ်တ၀င့် ဆွေးနွေးသင့်ပြီဟု ထင်မြင်သုံးသပ်နေကြပါသည်။ကျောင်းပထ၀ီသင်ခန်းစာများတွင် မုံရွာမြို့အနောက်ဘက် ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းဘေးတွင် စံပယ်တောင်၊ ကြေးစင်တောင်၊ လက်ပန်းတောင်းတောင်များရှိသည်ဟု ဆိုထားသော်လည်း ယခုအခါ တောင်ကြီးအချို့မှာ လုံးဝပျောက်ကွယ်လျက် ရှိနေပါပြီ။ယေဘုယျအားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက် ယိုယွင်းစေမည့် စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်သည့် ဒေသရှိ ပြည်သူအများစုမှာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးသဘောတရားများကိုလည်း ကောင်းစွာမသိကြပါ။ သူတို့ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ကြီးကြီးမားမား ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်ဟုလည်း လက်မခံ၊ မယူဆထားကြပါ။ သို့ရာတွင် လုပ်ငန်းလာရောက် လုပ်ကိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရှင်များမှာမူ ပတ်ဝန်းကျင် ယိုယွင်းပျက်စီးစေမည်များကို ကြိုတင်တွက်ဆ သိရှိထားနိုင်သော်လည်း လျစ်လျူရှုကာ လတ်တလော အကျိုးအမြတ်ရရေးကိုသာ အာရုံစိုက်လျက် လောဘမသတ်ဖြစ်နေကြပါသည်။ စီမံကိန်းများတည်ရှိရာ အနီးတစ်ဝိုက်မှ ဒေသခံများအနေဖြင့် လောလောဆယ် သူတို့ရင်ဆိုင်ကြရမည့် ပြဿနာများမှ ကင်းဝေးအောင်၊ စီမံကိန်းများ ရပ်တန့်သွားအောင်၊ သူတို့ ခံစားကြရမည့် ဆိုးပြစ်များ လျော့နိုင်သမျှ လျော့ရလေအောင် မည်သူ့ကိုမျှ မတောင်းဆိုနိုင်၊ မည်သို့မှ မကြံစည်နိုင်၊ မြေရေသယံဇာတများကို ရနိုင်သမျှ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားနိုင်ရန်၊ ဒေသအတွက် ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုး စောင့်ရှောက်ရမည့်အတွက်ကိုမူ တတ်နိုင်သမျှ နည်းစေရန်အတွက် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ချဉ်းကပ်ကြိုးပမ်းနိုင်ကြပါသည်။နောက်ဆုံးရလဒ်အဖြစ် အလူးအလဲခံစားကြရမည်မှာ ဘာမျှလည်းမဆိုင်၊ ဘာအကျိုးအမြတ်မှလည်း မခံစားလိုက်ရသည့် ဒေသခံပြည်သူများသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ဖျက်ဆီးမည့်သူများ နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုများကို လျှော့ချကာကွယ်နိုင်အောင်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်ခင်သူများ တိုးပွားလာအောင် လုပ်ဆောင်လိုစိတ် ပြင်းပြနေသူများမှာ ဒေသခံပြည်သူများသာ ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။သို့ရာတွင် ထိုသူများမှာ ဘယ်ကစ၍ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်း မသိဘဲလည်း ဖြစ်နေကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့မှာ မိရိုးဖလာအစဉ်အလာအတိုင်း သူတို့အလွယ်တကူ လုပ်လည်းလုပ်တတ်၊ လုပ်လည်းလုပ်နိုင်သည့် အလုပ်ဖြစ်သော တောတောင်စောင့်နတ်တွေကိုပဲ တိုင်တည်ရတော့မှာလိုလိုသာ ဖြစ်လို့နေပါတော့သည်။
ရေးသားသူ- လွင်ချန်ဖြိုး(နတ်မောက်) by 7Day News Journal
Online မှ Photo စုဆောင်းသူ (ငရဲသား)..................
Yamoun Nar's video:
ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် တောင်သူ ၁၂ ဦးထဲက ၉ ဦး လွတ်မြောက်
Published on September 11, 2012 by မင်းလွင် ·
မုံရွာမြို့ နန်းချွန်မြစ်ဆိပ်မှာ အဖမ်းခံရတဲ့ လက်ပန်းတောင်းတောင် ဒေသက တောင်သူတချို့ လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး တချို့လည်း ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။
မနေ့က မုံရွာမြို့ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားက ပြန်လာတဲ့ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် လက်ပန်းတောင်းတောင် ဒေသက တောင်သူ ၁၂ ဦးကို အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး မုံရွာမြို့ အမှတ် ၁ ရဲစခန်းမှာ ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ အဖမ်းခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတောင်သူတွေဟာ တပ်မတော်ပိုင် ဦးပိုင် ကုမ္ပဏီနဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီက သိမ်းထားတဲ့ ဒေသက ရွာသားတွေ ဖြစ်ပြီး ဆန္ဒပြပွဲတွေ လအတန်ကြာအောင် ဖြစ်နေကြတာပါ။ အဖမ်းခံရထားသူတွေထဲက ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ရွှေလှေရွာက ၇ ဦးကို အရင်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး ၀က်မှေးရွာက မမိဆွေ၊ မစန်းစန်းလှတို့ ၂ ဦးကိုတော့ ဒီနေ့ မနက် ၁ နာရီလောက်မှာ လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ ၀က်မှေးရွာသူ မမိဆွေက ပြောပါတယ်။ အဖမ်းခံရသူတွေထဲက ၀က်မှေးရွာသူ မသွဲ့သွဲ့ဝင်း၊ မအေးနက်နဲ့ မဖြူဖြူဝင်းတို့ကို စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့ ညနေမှာ အမှတ် ၁ ရဲစခန်းကနေ ခေါ်ထုတ်ပြီး တခြားကို ပို့ပေးခဲ့တယ်လို့ မမိဆွေက ပြောပါတယ်။ အမှတ် ၁ ရဲစခန်းမှာ အဖမ်းခံရစဉ်မှာ မသွဲ့သွဲ့ဝင်းတို့ကိုပါ လွှတ်ပေးဖို့ ပြောဆိုတဲ့အတွက် ရဲတပ်သားတွေနဲ့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီး ထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ လွတ်မြောက်လာတဲ့ မမိဆွေက ပြောပြပါတယ်။ “ကျမတို့က မအေးနက်နဲ့ မသွဲ့သွဲ့ဝင်းမပါရင် မပြန်ဘူးပြောတော့ ရဲနဲ့ ရဲမေတယောက်က အခန်းထဲပို့ပြီး ဆံပင်တွေလည်း ဆွဲဆောင့်တယ်။ ခါးတွေ၊ လက်တွေ လိမ်ချိုးပြီး တွန်းချတယ်။ မသွဲ့သွဲ့ဝင်းတို့ကိုလည်း ကားကြီးနဲ့ ဘယ်လဲမသိဘူး ခေါ်သွားတယ်။” ဆက်လက် အဖမ်းခံထားရတဲ့ ၀က်မှေးရွာက မသွဲ့သွဲ့ဝင်းတို့ သုံးဦးလွတ်မြောက်ဖို့ ဆန္ဒပြမှာကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက် မုံရွာမြို့မှာလည်း ဒီနေ့ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့မှာ လုံခြုံရေးတွေ တိုးမြှင့်ချထားပြီး အမှတ် ၁ ရဲစခန်း သွားရာလမ်းတွေကိုလည်း သံဆူးကြိုးချပြီး ပိတ်ထားတယ်လို့ မြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။ မနေ့က အဖမ်းခံရသူတွေကို လွှတ်ပေးဖို့ မြို့တွင်းလှည့်လည် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုရာမှာ ဦးဆောင်တဲ့ မုံရွာခရိုင်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂက ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အိမ်တွေကိုလည်း နယ်မြေခံ ရဲတပ်ဖွဲ့က ရှာဖွေခဲ့တယ်လို့ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုရဲရင့်ကျော်က ပြောပါတယ်။ “ကျနော့်အိမ်၊ ကိုနွေဦးကိုအိမ်၊ ကိုထင်ရှားအိမ် အရှာခံရတယ်။ ကိုဟိန်းဇော်ဝင်း အိမ်တွေ ရှာခံရတယ်။” မသွဲ့သွဲ့ဝင်းတို့ အဖမ်းခံရတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မုံရွာမြို့ အမှတ် ၁ ရဲစခန်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့် ပြန်လည်ဖြေကြားဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း အဖမ်းခံထားရတဲ့ မသွဲ့သွဲ့ဝင်းတို့ ၃ ဦး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အမှတ် ၁ ရဲစခန်းရှေ့မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြကြတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/11/2012
အမေရိကန် သံတမန်အဖွဲ့ ရခိုင်သို့ရောက်ရှိ၊ အတူယှဉ်တွ...
မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးငယ် ၄၂ ဦး ပြည့်တန်ဆာအဖြစ...
စီမံကိန်းကြီးတွေက ပြည်သူတွေအတွက် ထိုက်တန်ရဲ့လား